YEYINTNGE(ကနဒေါ): Sunday, March 14
BY YeYint Nge ... 3/14/20100comment
လွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်ပါ့မလား?
http://www.mediafire.com/?2hmnogamyyz၂၀၁၀: လွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်ပါ့မလား? (ထွန်းေaာင်ကျော်)
Voice of Burma Issue No. 753, March 14, 2010
ဘယ်လမ်းလိုက်ကြမလဲနှင့် လက်တွေ့နိုင်ငံရေး (၁၁)
- - - ဗမာ့တပ်မတော်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အချို့မလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဗမာ့တပ်မတော်ကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရ လက်အောက်ခံ တပ်မတော်အဖြစ် ထားရမလားဟု အပြစ်ပြောကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်က ထိုကဲ့သို့ အပြစ်ပြောသူများကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်လျှက်ရှိသေးသော ဗမာပြည်တွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ လက်အောက်ခံ စစ်တပ်အဖြစ် မထားလို့ရှိလျှင် ဘယ်လိုလုပ် ထားရမှာလဲဟု မေးလိုပါသည်။ - - - -
- - - - ဗမာ့တပ်မတော်ကိစ္စမှာ လက်ငင်းအားဖြင့် အဖျက်အသိမ်း ခံမည်လော၊ သို့တည်းမဟုတ် စစ်တပ်အဖြစ် တည်ရှိရန် ကြိုးစားမည်လော ဟူသော အမေးနှစ်ရပ်ကို မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စမှာ လက်ငင်း အရေးဆို၊ လက်ငင်း ဆုံးဖြတ်ရမည့်ကိစ္စ ဖြစ်သဖြင့် ဗမာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရသည်အထိ ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သော ကိစ္စမဟုတ်ပေ။ ထိုကဲ့သို့ လွတ်လပ်ရေး ရသည်အထိ ဗမာ့တပ်မတော်ကို အဖျက်အသိမ်း မခံလိုလျှင် အင်္ဂလိပ်နှင့် စစ်တိုက်ရန်သာ ရှိသည်။ သို့သော် စစ်တိုက်ခြင်း၊ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း မည်သည်မှာ ကလေးကစားသလို စိတ်ထင်တိုင်း ပြုကျင့်အပ်သည့် အရာမျိုး မဟုတ်သဖြင့် အင်္ဂလိပ်လက်အောက်၌ ထားပင် ထားရစေကာမူ စစ်တပ်အဖြစ် တည်ရှိရန် ပဓာနဖြစ်ရကား၊ မူလကပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဆိုထားခဲ့ပေသည်။ - - - -
၁၉၄၅ခု၊ နိုဝင်္ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့ ရွှေတိဂုံ စေတီတော် အလယ်ပစ္စယံတွင် ကျင်းပသော လူထုအစည်းအဝေးကြီး၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ကြားခဲ့သည့် “သတ္တိရှိလျှင် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ကြရအောင်” အမည်ဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သော မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နှုတ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကောက်နှုတ်ချက်ကို တခုတ်တရ တင်ပြနေလေတော့ ကျုပ်က အင်အယ်လ်ဒီပါတီ အဖျက်သိမ်းမခံရအောင် မှတ်ပုံတင်ဖို့ တိုက်တွန်းနေတယ်လို့ ထင်ကောင်း ထင်ကြပေမယ်။ အင်အယ်လ်ဒီပါတီ မှတ်ပုံတင် မတင်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င် မ၀င်ကို ကျုပ်တို့ ပြည်ပက မည်သို့သော လူစွမ်းကောင်းကမှ ရွှေကြိုလုပ်နိုင်၊ နှပ်ကြောင်းပေးနိုင်၊ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ကြမယ် မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ NLDရဲ့ သဘောသဘာဝကို အနဲငယ်လောက် ဆန်းစစ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ NLDသည် အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ လူငယ်၊ အမျိုးသမီးစတဲ့ သီးခြားလက္ခဏာဆောင်သော လူထုလူတန်းစား ပါတီ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ စတဲ့ သီးခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ လူမျိုးစုပါတီလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်ရေးသက်သက်အတွက် လက်ကိုင်ဒုတ်အဖြစ် ဖန်တီးထားတဲ့ ကြံ့ဖွတ်လို ပါတီမျိုးလည်း မဟုတ်သလို၊ ပစ်ချလိုက်တဲ့ အရိုးအရင်းတွေကို ခွေးကတက်က ထိုင်ဝါးရင်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဒူးထောက် အလုပ်အကြွေးပြုဖို့ အသေရေမဲ့စွာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကျောင်းသားယောင်ယောင် ပါတီလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်သော လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ လူတန်းစားပေါင်းစုံကို ကိုယ်စားပြုပြီး လူထုအကျိုးအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူထုအကျိုးဆောင်ပါတီ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြေအနေတွေက သင်တုန်းဓါးဖျားက ပျားရည်စက်ကို လျှာနှင့် ယက်နေရသလို အနည်းငယ်မျှပင် အမှားမခံ၊ အတိမ်းအစောင်း အထိအရှ မခံတဲ့ အန္တရာယ်တွေနှင့် ပြည့်လျှမ်းနေတဲ့ ကာလလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားပြုပြီး လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်တဲ့ ပါတီဖြစ်သည်နှင့်အညီ၊ NLDပါတီ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ ပါတီမှတ်ပုံတင်သင့်တယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်သင့်တယ်လို့ ထင်သူများ၊ မှတ်ပုံမတင်သင့်၊ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်သင့်လို့ ယူဆသူများ၊ လိုအပ်သော ပြင်ဆင်မှုတွေကို အဆက်မပြတ် လုပ်ကိုင်ရင်း အခြေအနေတွေကို နောက်ဆုံးအချိန်အထိ စောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ဆုံးဖြတ်လိုသူများ စသဖြင့် အမြင်မတူသူတွေ သဘာဝကျစွာ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် NLDသည် Unity in Diversityဆိုသော စကားကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံ၊ အသိအမြင် မတူညီကြသော ခေါင်းဆောင်များ စုစုပေါင်း (၁၂၀) အင်အားရှိ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့တို့က လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ညှိနှိုင်းပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ၊ လူထု၏ အကျိုးစီးပွါးအတွက် ပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရေး မတင်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရေး၊ မ၀င်ရေးကို ဆုံးဖြတ်ကြမှာပါ။
ပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့ လိုလားတဲ့ NLDခေါင်းဆောင်တွေသည် နိုင်ငံရေး အမျှော်အမြင် ကြီးမားသူတွေဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံမတင်လိုသူများကို နိုင်ငံရေး အမြင်တိုသူများဖြစ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်၊ ပါတီမှတ်ပုံမတင်လိုတဲ့ ခေါင်းဆောင်များသည် ရဲရဲတောက် လူထုခေါင်းဆောင် အစစ်အမှန်များဖြစ်ကြပြီး မှတ်ပုံတင်လိုသူများကို အချောင်သမားတွေ ဖြစ်တယ်လို့ အလွယ်သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဒီလောက်တော့ မလွယ်လောက်ပေဘူး။
ကျုပ်တို့ ပြည်ပအင်အားစုတွေ အလုပ်က ပြည်တွင်းက လူထုကိုယ်စားပြုသူများ၊ ပါတီအဖွဲ့အစည်းများကို အထောက်အကူပြုပေးရန်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကသာ ကျုပ်တို့ကို ဦးဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့က သူတို့ကို ဦးဆောင်လို့ မရပါဘူး။
သို့သော် အချက်အလက်အချို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျုပ်အမြင်ကို ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ(၆)(ဂ)ပါ “ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး”ဆိုသည့် ကန့်သတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောလိုပါတယ်။ ဆောင်းပါး အမှတ်(၉)မှာ အသိအမှတ်ပြုခြင်း(Recognition)နှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း(Engagement) မတူပုံကို အကျယ်ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ နာဂစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံတင်သာမက တရားမ၀င်တဲ့ န၀တ၊ နအဖတွေ ထုတ်ပြန်တဲ့ ဥပဒေမှန်သမျှ၊ တစ်ခုမှ တရားမ၀င်ပါဘူး။ အသိအမှတ်ပြုစရာ မလိုပါဘူး။ သို့သော် လက်တွေ့အခြေအနေ၊ လက်တွေ့နိုင်ငံရေး(Real Politics)အရ ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် လိုအပ်သဖြင့် ပါတီ တည်တံ့ရေးဆိုင်ရာ၊ ပါတီလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အမှုကိစ္စတွေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ အမှုအခင်းတွေမှာ ၄င်းဥပဒေတွေကို အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး အကိုးအကားပြု လျှောက်လဲကြ၊ တိုင်းကြားကြရပါတယ်။ ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ရန်အလို့ငှာ မလွှဲမရှောင်သာ (ယာယီ)အသိအမှတ်ပြုရတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအရ ကျင်းပမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်လိုလျှင်၊ လူထုကြားမှာ တရားဝင် စည်းရုံးလှုပ်ယှားလိုလျှင် အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံကို အနည်းဆုံးအားဖြင့် (ယာယီ)လက်ခံပေးထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ယာယီတောင်မှ လက်မခံပေးနိုင်ရင် ပါတီမဖွဲ့ဖို့၊ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ဖို့ဘဲ ဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ချက်က နိုင်ငံရေးပါတီကို တည်ထောင်သူ၊ နိုင်ငံရေးပါတီဝင်များနှင့် အရွေးချုယ်ခံလိုသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလည်လောင်းများသည် ထောင်ဒါဏ်ကျခံသူများ မဖြစ်ရခြင်းဆိုသော ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲကာလက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယခုကဲ့သို့ အကျယ်ချုပ်ခံထားရသော အခြေအနေတွင် ရှိနေခဲ့သော်လည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလောင်းအဖြစ် အမည်တင်သွင်းခြင်းကို အဟန့်အတား မဖြစ်ခဲ့ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လက်ရှိအနေအထားကို နအဖရဲ့ တည်ဆဲ ဥပဒေပေါင်းစုံပေါ် အခြေခံပြီး ချဉ်းကပ်မည့်အစား၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနှင့် နအဖတို့က မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချမှု ရှိ မရှိ၊ လက်တွေ့အရှိတရားကို အရှိအတိုင်း ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ သတ္တိ ရှိ မရှိ အပေါ် အခြေခံစဉ်းစားသည်က ပို၍ လက်တွေ့ကျပါလိမ့်မယ်။ နအဖတွေဟာ သူတို့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ဘယ်ဥပဒေကိုမဆို နိုင်ငံရေး ရှုဒေါင့်က ကြည့်ပြီး မလိုရင် မလိုသလို ပစ်ပယ်တတ်ကြသူတွေပါ။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးအရ ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြသနာများကို နိုင်ငံရေးအမြင်အရသာ စဉ်းစားတွက်ချက်ခြင်းသည်သာ သင့်လျှော်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပါတီမှာ ဦးဆောင်ခွင့်၊ အရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့် စသည်တို့ကို ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးဆိုလိုက အရေးဆိုနိုင်သော်လည်း အဆုံးအဖြတ်သည် နိုင်ငံရေး အဆုံးအဖြတ်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၂၀၁၀ခု မတ်လ(၈)ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ၉၁(က)အရ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ (န၀တ၏ ဥပဒေအမှတ် ၁၄/၈၉)ကို ရုပ်သိမ်းပြီး ၄င်းရုပ်သိမ်းမှုကြောင့် ပုဒ်မ၉၁(ခ)အရ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ပျက်ပြယ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်းသည် နအဖအနေနှင့် မိမိတွင် မရှိသောအာဏာကို သိသိသာသာ ကျော်လွန်ဖေါက်ဖျက်ပြီး စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နအဖတွင် လွှတ်တော်အမတ်များကို ဥပဒေထုတ် ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့် အာဏာ လုံးဝမရှိပါ။
န၀တက ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲကို ဦးဆောင် ကျင်းပပေးခဲ့သည် မှန်သော်လည်း လူထုက ရွေးချယ်ပြီးသော အမတ်များကို ကမ္ဘာပေါ်က မည်သည့်အစိုးရမျိုးကမှ အမိန့်ဒီကရီနှင့် ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခွင့် မရှိပါ။ လူထုကသာ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခွင့် ရှိပါတယ်။ နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံသည်ပင်လျှင် လာမဲ့ ရွေကောက်ပွဲမှာ အရွေးခံရတဲ့ အမတ်များရဲ့ လွှတ်တော် စတင်ကျင်းပကာမှ တရားဝင် အသက်ဝင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းလွှတ်တော် ကျင်းပဖြစ်သောအခါမှသာ နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ အရွေးကောက်ခံ အမတ်များက အမတ်အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကြိမ်ဆိုကြရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်ရောက်မှသာ ၁၉၉၀ခု အရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလည်များ၏ တရားဝင် ရပ်တည်မှု အနေအထားကို မေးခွန်းထုတ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။
မတ်လ (၁၄)၊ ၂၀၁၀
14 March 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/kj1bpv714 March 2010 Yeyintnge Diary
ဖို့ ဝန်းရှိမြန်မာ မ၀င်ရ ဆိုင်းဘုတ် အတွက် ဆိုင်ရှင်ကတောင်းပန်
လူတယောက် ဟာ.. ဟောဒီ ခေတ်ကြီးမှာ..အနည်းဆုံး၊ ဂျင်းဘောင်းဘီ တထည် လောက်တော့ ပိုင်ဆိုင် ပြီးသား ဖြစ် ပေလိမ့်မည်။
မဟုတ်ရင် လည်း.. ဂျင်းဘောင်းဘီ တထည် လောက် လို ချင် လိုက်တာ လို့ - စိတ်ကူးနေ ပေလိမ့်မည်။
ဂျင်းန် အသုံးအဆောင်တွေ ဖက်ရှင်လော က ထဲကို ဘယ် အချိန် က ၀င်ရောက်လာခဲ့ သလည်း။ ၁၉ ရာစု နှောင်းပိုင်း လောက်က.. အလုပ်ကြမ်းသမား တွေ ၀တ်ဖို့..ဂျင်းန် ဘောင်းဘီ တွေ ပေါ် လာ ခဲ့ သည် လို့ တော့..ဆို ထားသည်။ ၂၁ ရာစု - စတိုးဆိုင် ကြီး တွေ ရဲ့ မီးရောင် ပြိုးပြက် အောက်မှာ တော့.. Levis တို့ Wrangler တို့ ဆို တာ..သိပ်ကို ခမ်းနား တဲ့ ဆိုင် ကြီး တွေ ဖြစ်နေပြီ။ ဒီ တံဆိပ် တွေ ကို မ၀ယ် နိုင် သေး ရင် တောင်.. Wal-Mart တို့ ဘာတို့ မှာ..ဈေးသင့်တဲ့ တခြား တံဆိပ် တခု ခု ၀ယ် ၀တ် ဦးတော့...ကျ ကျ နန ရှိ နေ နိုင် သေးသည်။
ဈေးကြီး တဲ့ ဂျင်းန် ပဲ၊ ၀ယ်ဝယ်...ဈေးတော်တဲ့ ဂျင်းန် ပဲ၊ ၀ယ်ဝယ်.... အဲဒီ ပမာဏ တန်ဖိုး တွေ ရဲ့ နောက်ကွယ်က..labor cost ဖြစ်တဲ့..အလုပ်သမားတွေ ရဲ့ ချွေး စက် တွေ မျက်ရည် တွေ အကြောင်း ကိုတော့....ဘယ်သူ မှ တွေး မိ မှာ မဟုတ် တာ..သေချာ လွန်း လှ သည်။
အဲဒီ - မမြင် ရ တဲ့ မျက် နှာ တွေ အကြောင်း ကို ၊ ဂျူးလူမျိုး ဒါရိုက်တာ Micha Peled က China Blue ဆိုပြီး..ကမ္ဘာ့ ဂျင်းန် ၀တ်ဆင် သူများ ထံ ဖွင့်ထုပ် သယ်ယူ လာခဲ့ သည်။
( အဲဒီ documentary ကို ကြည့် ခဲ့ မိတာ ၂ နှစ် လောက် တောင် ရှိ တော့မည်။ ခုမှ ပဲ ရေး ဖြစ် တာတော့..ခုမှ ပဲ ရေးဖြစ် လို့ပါပဲ။ တရုတ် အိုလံပစ် ကြောင့်လည်း.. အမြင်ကပ် ကပ် နဲ့..ရေးချင် စိတ် ပေါက် လာ တာ ဖြစ် နိုင်သည်။)
အမေရိကန်ု အပါအ၀င်..ကမ္ဘာ့ ဈေးကွက် အတော် များ များက.. ဂျင်းန် ဘောင်းဘီ များ ရဲ့ ၉၀ % လောက် ဟာ Made in China ဆိုတဲ့ sweatshop ကြီး ကနေ ထုတ်လုပ် နေ တာပါ။ ဗမာလို အဓိပ္ပါယ် အနီးဆုံး ယူ ကြည့် ရင်တော့..`၀ိသမ လောဘ လုပ်ငန်း´ လို့ ပြော ရမလား။ ဘာလို့..၀ိသမ လောဘ- လို့ ပြော ရ လည်း ဆို ရင်- အခြေ အနေ အရ ဈေးပေါ ပြီးသား ဖြစ်နေ တဲ့ လုပ် အား တွေ အပေါ် မှာ ..ထပ် ဆောင်းပြီး.. ခေါင်းပုံဖြတ်တာ တွေ.. မမျှတတဲ့ အလုပ်ချိန် တွေ.. အနေအစား နှိပ်စက်မူတွေ.. ပြီးတော့..အလုပ်သမား အခွင့်အရေး တောင်းဆိုခွင့် အားလုံးကို အမှောင် တိုက် သွင်းထား တဲ့..လုပ်ငန်းခွင် အခြေ အနေ တွေ ကြောင့် ပါ။ အားလုံး မဟုတ်ရင် တောင်မှ..တရုတ် ပြည် ကြီးထဲ မှာ.. sweatshop တွေ အများကြီး ရှိ နေတယ် ဆို တာ.. အားလုံး သိ နေ ကြပါတယ်။
အဲဒီ မှတ်တမ်း ရှပ်ရှင်လေး ထဲ မှာ-Wal-mart ကို သွင်းဖို့ ဖောက်သည် ရ ထား တဲ့ ဂျင်းန် ဘောင်းဘီ ချုပ် စက်ရုံ တခု ရယ် .. jasmine လို့ နံမယ်ပေး ထား တဲ့..၁၇ နှစ် အရွယ် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း က..တောသူ အထည်ချုပ် သမလေး ရယ်..ကို.. ထိထိ မိမိ..ပြီးတော့..ခက်ခက်ခဲခဲ မှတ်တမ်းတင်ထား ခဲ့ တယ်။ ဒါရိုက်တာက..ဒေသဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ တယောက် က တဆင့်..စက်ရုံ ထဲက..တာဝန် မှူး တယောက် နဲ့ ကြိုးစားချိတ်ဆက် ပြီး.. လျှို့ဝှက် ရိုက် ကူး ခဲ့ ရ တယ် လို့ ဆို တယ် ။
မနက် ၈ နာရီ ကနေ..ညသန်းခေါင် ၂ နာရီ ထိ ..တပတ်မှာ ၇ ရက် နားရက် မရှိ .. အလုပ် လုပ် ရ တဲ့.. jasmine တို့ ရဲ့.. ပြွှတ်သိပ် နေတဲ့..လူနေ ဆောင် လေး ကို တောင်.. မှုံတိမှုံ မွှား အလင်းရောင် ထဲ မှာ..မရ အရ ရိုက် ယူ ခဲ့တယ်။ သူ့လို တခြား မြို့ပေါ် တက် အလုပ် လာ လုပ်ကြ တဲ့..မိန်းကလေး ၁၂ ယောက် နဲ့ အတူ ရော နေရတဲ့..သူတို့ အခန်း လေးမှာ.. ကိုယ်လက်သန့်စင်ရာ အခန်းက..တခု တည်း ။ စားစရာက..မနက် စွပ်ပြုတ်တခွက်..ည စွပ်ပြုတ် တခွက်။ ၂ ထပ် ကုတင်လေး တွေပူးကပ် နေ တဲ့ ည မှာ..အချင်းချင်း..အိမ်အကြောင်း..တောအကြောင်း..ယာအကြောင်းလေး တွေ ပြောပြီး..အလွမ်းဖြေကျ။ အပူအပင် သိပ် မရှိ တဲ့.. jasmine ကတော့..ဒီ နှစ် တရုတ် နှစ်ကူး မှာ တောပြန်ပြီး..မိဘ ၂ပါးနဲ့..မောင်လေး တွေကို..လက်ဆောင်တွေ ပေး ဖို့..စိတ်ကူး တွေ ယဉ် နေ သေးတယ်။ သူလုပ် ရ တာက.. ချုပ်ပီးသား ဂျင်းဘောင်းဘီ တွေ က..အမှုန်အမွှား ချည်စ အကျန် တွေကို လိုက် ညှပ် ရတာ။ တနာရီ ကို ( အမေရိကန် ဒေါ်လာ အားဖြင့် ) ၆ ဆင့် ရ တဲ့..လုပ်အားခ အတွက်..သူတို့ အားလုံး..မနေ မနား။ အလုပ်သမား ခေါင်း က လိုက်စစ် နေ တဲ့ ကြား မှာ .. အိပ်မငိုက် အောင်..သူတို့ မျက်ခွံ တွေကို..အ၀တ်ညှပ် ကလစ် နဲ့ တောင် ညှပ် ထား ကြ ရ သတဲ့။
ကလေး တွေ ဆို တော့လည်း.. သိပ် ပြီး စိတ်ပျက် ညီးညူ ပုံ မပေါ်။ အိမ် အပြန် ယူသွားမဲ့..ယွမ်ငွေ တွေ တွက် ပြီး...သူတို့ဘ၀ ကို ..ပြုံးစပ်စပ် နဲ့ ..ကျေနပ် နေ ကြ ပုံပဲ။ ဒါပေမဲ့..တကယ် နှစ်ကူး နီး လာတော့.. တနေ့ကို ၁ ဒေါ်လာမပြည့်တဲ့ လစာ ထဲက.နေ..အဆောင်စရိတ်..စားစရိတ်.. တွေ အပြင်.. ကြားထဲ မှာ တရက်.. အိပ်ငိုက်လွန်းလို့..အချိုရည်ဗူး ခိုးထွက်ဝယ်တာ..မိသွားခဲ့ဘူးတဲ့.. ဒဏ်ကြေး ကို နှုတ်လိုက် တော့.. ဝေးလံ လှ တဲ့.. တောင်ပိုင်း က သူ့ရွာ လေး ဆီပြန် ဖို့..ခရီးစရိတ် တောင် မလောက် ရှာ တော့ဘူး။
ဒီ နှစ် မပြန် ရ လည်း..နောက် နှစ် ပေါ့ လို့..သူ တွေး နေ ပုံ ရ သည် ။ သူကိုယ် တိုင် ပင် ဂျင်းဘောင်းဘီ တထည် ကို ၀တ် ထား ရင်း.. ပတ် ပတ် လည် မှာ တောင်လုံ ပုံ နေတဲ့..ဂျင်းဘောင်းဘီ ပုံ ကြီး ထဲ က.. ဂျင်းဘောင်းဘီ တထည် ရဲ့.. ချည်စ တွေ ကို..ခေါင်ငုံ့ဖြတ် နေ ရင်းက.. ကင်မရာ ကို လှမ်းကြည့် တယ်။ ပြီးတော့..သူ့ဘေးက..သူငယ်ချင်း လီပင်း ကိုပါ ကြည့် လိုက် ရင်း..ခပ် ပြုံးပြုံး ပြော ချ လိုက် တယ်။
တကယ့် ကို.. ဂျင်းဘောင်းဘီ တထည် လောက် ..အသည်းအသန် လို ချင် နေ ခဲ့ တဲ့ သူတွေ.. ဆိုဗီယက် ပြည် ထောင်စု ကြီး ထဲ မှာ .. အများ ကြီး ရှိ နေခဲ့ ဘူးတယ်။
၁၉၆၀ ၀န်းကျင် ..စစ်အေး ကာ လ ကြီးမှာ .. ဆိုဗီယက် မှာ.. အမေရိကန် ယဉ်ကျေးမူတွေ..အသုံးအဆောင် တွေဖြစ် တဲ့..ကိုကာ ကိုလာ.. ကစ်ကတ်ချောကလက် .. Beatles သီချင်း တွေ အပါအ၀င်.. ဂျင်းဘောင်းဘီ
၀တ်ဆင် မူ တွေ ကိုပါ..တင်းကျပ်စွာ ပိတ်ပင် တားမြစ် ထား ခဲ့ တယ်။ အဲဒီလို သံကန့်လန့်ကာ ကြီး ပိတ်လိုက် ရင်.. လူတွေ လည်း..သံတုံး သံခဲ တွေ လို..ပုံသွင်းချင် သလို သွင်းလို့ ရမယ် လို့ ထင် ခဲ့တဲ့.. အဲဒီ ခေတ် က..ခေါင်း ဆောင် ကြီး တွေ ကို..အံ့ လည်း သြ ပါ ရဲ့ ။
အဲဒီ အချိန် တွေက.. နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား တွေ..ဒါမှမဟုတ်..ရုရှ ပညာ တော်သင် တို့ဘာတို့..တိုင်းပြည် ထဲ ပြန်ဝင် လာရင်.. ဂျင်းဘောင်းဘီ တွေ..မှောင်ခိုသွင်း ကြ တယ် တဲ့ ။ ဗမာပြည် မှာ..ကားသွင်းသလောက်.မြတ် မည့် ပုံပင်။ လမ်းပေါ် မှာ..နိုင်ငံခြား သား ခရီးသွား တယောက် မြင် ရင်..နောက်က လိုက် ပြီး.. ဂျင်းဘောင်းဘီ ရောင်းဖို့ ပါ လား လို့..တတွတ်တွတ် လိုက် မေး တဲ့ အထိ တောင် ရှိ ခဲ့ တယ်လို့.. အင်တာနက် တနေရာ မှာ..ပြန် ရှာ ရင်း တွေ့ လိုက် ရ သည်။
တကယ်က..China Blue လိုပဲ..ဒီ အကြောင်းတွေ ကိုလည်း.. documentary တခု မှာ..သေသေချာ ချာ .. ကြည့် လိုက် မိ တာပါ။ အဲဒီ ရုပ်ရှင် ဖိုင် ထဲ မှာ ဆိုရင်.. လူငယ် တွေက.. နိုက် ကလပ် ကို လာ ကြ... အထဲ ရောက်တာနဲ့..အိပ်တွေ ထဲ မှာ..ခိုးထဲ့ လာတဲ့..ဂျင်းဘောင်းဘီ တွေ..အမြန် လဲဝတ် ကြ နဲ့.. မယုံ နိုင် စရာ ပါပဲ ။ ဒီ့ထက်ပို မယုံ နိုင် စရာက.. တကြော့မှာ..ဂျင်းဘောင်းဘီ အကြီး အကျယ် မှောင်ခိုသွင်း တဲ့ လူ တယောက် ကို..ဖမ်းမိ သွား တာ.. သေဒဏ် ပေးဖို့ ထိ တောင်..ဖြစ်ခဲ့ ရတယ် တဲ့။ တကယ် ပေးဖြစ် ခဲ့ လား ဆိုတာ တော့ မသိ..။ အဲဒီ အချိန်က.. ခေတ်စနစ် ကို ရေးစပ် တဲ့..ကဗျာ ဆရာ ကြီး တွေ..သုံးသပ် တဲ့..ပညာရှင် ကြီး တွေ - တချို့ တော့..သေဒဏ် ပေး ခံ ခဲ့ ရ တဲ့..နာနာကျင်ကျင် မှတ်တမ်းတွေ ရှိ ခဲ့ ဘူး သည်။
ခု တော့ ..ဂျင်းဘောင်းဘီ တထည် ၀ယ် တိုင်း.. Made in China ဆိုတဲ့..တံဆိပ်လေး ကို အသာ ကြည့် လိုက် ရင်း..အိပ်ကပ် ထဲ က..စာလေး တစောင် လောက် များ ထွက်လာ မလား ရယ်.. လို့..ရယ်သွမ်းသွေး တဲ့ အတွေး နဲ့ တွေး နေ မိ ရတယ်..။
တကယ်တော့..အားလုံးဟာ- နိုင်ငံရေး ပါပဲ။ ခုဆို..အိုလံပစ် နိုင်ငံရေး.. ။ လောင်စာ နိုင်ငံရေး..။ ကမ္ဘာ ကြီး ပူနွေးမူ နိုင်ငံရေး.. ။ မြန်မာ ပြည်က.. နာဂစ်မုန် တိုင်း နိုင်ငံရေး... ။ ဂန္ဓီကြီး ရဲ့..ဆား လည်း နိုင်ငံရေး... ။ ကချင် ကျောင်းသားတွေ ပြော နေတဲ့..ကျောက်စိမ်း တွေ လည်း.. နိုင်ငံရေး...။
မီးဖိုချောင်က.. အိမ်ရှင်မ တယောက် ရဲ့.. ဆီပုလင်း လည်း..နိုင်ငံရေး ပါပဲ ။
၂၀၀၉ ခုနှစ် မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၉၀၇ ဘီလျံ ရှိခဲ့
၂၀၀၉ ခုနှစ် မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးမှာ အမေ ရိကန် ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၉၀၇ ဘီလျံရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်ထက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ပို၍ကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်စီးပွား ရေးသံမှူး Mr Jin Honggeng ၏ ပြောကြားချက်အား ကိုးကား၍ Xinhua သတင်းတွင်ဖော်ပြထားကြောင်း သိရှိရသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးမှာ အမေ ရိကန် ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၉၀၇ ဘီလျံရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်ထက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ပို၍ကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်စီးပွား ရေးသံမှူး Mr Jin Honggeng ၏ ပြောကြားချက်အား ကိုးကား၍ Xinhua သတင်းတွင်ဖော်ပြထားကြောင်း သိရှိရသည်။
အလားတူပင် မကြာသေးမီက စတင်ခဲ့သော တရုတ်-မြန်မာ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေး China - ASEAN Free Trade Area (CAFTA) တည်ထောင်ခြင်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေး တွင် ကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းကို ပိုမိုဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ တရား ၀င်ထုတ်ပြန်ထားသောစာရင်းများ အရ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမှာ ၂ ဒသမ ၉၀၇ ဘီလျံဒေါ်လာရှိပြီး ယခင်နှစ်ထက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုး တက်ခဲ့ကြောင်း၊ စုစုပေါင်းကုန် သွယ်မှုဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများအရ တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင် ပို့မှု ၂ ဒသမ ၂၆ ဘီလျံရှိပြီးမြန်မာ နိုင်ငံမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်သွင်းမှု ၆၄၆ သန်းရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် နယ်စပ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိ သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ဘက်သို့ တင်ပို့မှုပိုင်းတွင် အားသာချက်များ ရှိသကဲ့သို့ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအပေါ် တရုတ် ဈေးကွက်မှပစ္စည်းများ အလုံး အရင်းနှင့်ဝင်ရောက်မှုမှာယခင်ကပင် အားကောင်းနေသကဲ့သို့ ယခုလို Free Trade Area ကို အကောင် အထည်ဖော်ပြီးနောက်ပိုင်း ဒေသ တွင်းနိုင်ငံများအပေါ်ပိုမိုတင်သွင်းခွင့် ရလာကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
''နိုင်ငံတွေအားလုံးက Free Trade လုပ်ဖို့ သဘောတူထားကြ တယ်။ အာဆီယံဒေသအတွင်းမှာ Free Trade ကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေ အလွယ်တကူစီးဆင်းမယ်လို့လက်ခံ ထားကြတယ်။ ပြီးတော့ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေက ထုတ်ကုန်တွေပိုမိုတင်ပို့ နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းကြပေမယ့် တရုတ်ဈေး ကွက်ကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာနဲ့ တရုတ်နဲ့အပြိုင်တင်ပို့ဖို့ဆိုတာ တော် တော်ကိုအခက်အခဲရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ရပ် ပါ''ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာမှသတင်းထောက်တစ်ဦး က ပြောပြခဲ့သည်။
အလားတူပင် ဒေသတွင်းနိုင်ငံ များ အထူးသဖြင့်အာဆီယံနိုင်ငံများ တွင် ရှေ့ရောက်လာသော ဗီယက်နမ် နိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ကုန်သွယ်မှုသိသိသာသာများ လာသော်လည်း ကုန်သွယ်မှုတွင် လိုငွေပြနေကြောင်းသိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း တရုတ် နိုင်ငံနှင့်နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်သွယ်ရေးတွင်အား သာချက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းတွင်မူ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ ရရှိ ထားသော စာရင်းများအရ တရုတ် နိုင်ငံ၏မြန်မာနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မှာ ၁ ဒသမ ၃၃၁ ဘီလျံ ဒေါ်လာ ရှိပြီး အဓိကအားဖြင့် သတ္တုတူး ဖော်ရေး၊ လျပ်စစ်စွမ်းအင်၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်း သိရှိရ သည်။
Thursday, 11 March 2010 01:52
လွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်ပါ...
ဖို့ ဝန်းရှိမြန်မာ မ၀င်ရ ဆိုင်းဘုတ် အတွက် ဆိုင်ရှင...
၂၀၀၉ ခုနှစ် မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေး အေ...